Umdyarho ngoku wokuBaluleka kwamaXesha oPhumo loBhubhane: Iqonga le-IMEX
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iintlanganiso » Umdyarho ngoku wokuBaluleka kwamaXesha oPhumo loBhubhane: Iqonga le-IMEX
Iindaba zeManyano • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Education • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Kwiingcali zemibutho, ubhubhane aluzange lube kukuphazamisa kuphela kodwa lwalukhawulezisa utshintsho kwiindawo ezinje ngolawulo, ulindelo lwamalungu, kunye netekhnoloji.
Imiceli mngeni ejongene nemibutho iqinise kuphela, inyanzela iinkokheli zemibutho ukuba zicinge ngokwahlukileyo kwaye zibethelela isidingo sotshintsho lokwenyani.
Amanyathelo oza kuwathatha kolu tshintsho kunye nezenzo ezifunekayo ukuze kuphuculwe imeko-bume entsha zijolise kwiQonga lobuNkokheli boMbutho.
I-CEO yeQela le-IMEX lazisa umsitho wokuzinikela weengcali zemibutho ezenzeka kwi-IMEX America ngo-Novemba.
Ubanjwe ngoMvulo nge-8 kaNovemba njengenxalenye yoMvulo ngoMvulo, inikwe amandla yi-MPI, IQumrhu leeNkokeli, Yenziwe ngu-ASAE: IZiko lobuNkokheli boMbutho, yindawo yokusebenzela yangasemva kwemini ekhokelwa liqela leengcali kubandakanya uHarrison Coerver noMary Byers, ababhali be Uhlanga lokuBaluleka.
UHarrison Coerver, umbhali wohlanga lokuBaluleka
UMary Byers, umbhali wohlanga lokuBaluleka
Iworkshop yokusebenzisana kakhulu, enesihloko Uhlanga lokuBaluleka kwamaXesha oPhumo loBhubhane, iphonononga iikhonsepthi ezivela kwincwadi yesikhokelo yeminyaka eli-10 yesikhokelo seenkokheli zemibutho kwaye ithatha ukujonga okungqindilili, okungekho ngqiqweni kwimiceli mngeni. Itrust ngomnye wale micimbi njengokuba umbhali-mbhali uMary Byers ecacisa: “Senze uphando olutsha ekwakheni ukuthembana kwaye sifumanise ukuba ibhodi enkulu ikufumanisa kunzima ukwakha ukuthembana ngokukhawuleza. Amaqela amancinci abekwe ngcono ukuba enze izigqibo kwaye akukho 'nto yokutya'.
Ukujoyina uMary noHarrison yipaneli yabaphathi abaza kuthi babelane ngamava abo ngokwenza iindlela zolawulo kulawulo; Ukujonga kwakhona ubungakanani beenkqubo kunye neenkonzo zabo; kunye nokwandisa ukwamkelwa kwabo "kwedijithali kuqala" yokucinga. Aba ngaba: UMoira H. Edwards, uMongameli wamaQabane e-Ellipsis; Steve Smith, uCEO weZiko loLawulo loMbutho; kunye noLen Toenjes, uMongameli weeKontraka eziDibeneyo zeMissouri.
IQumrhu leNkokeli yoMbutho limema kuphela kwaye livulelekile kwiinkokheli zombutho kubandakanya ii-CEO, ii-COO, oomongameli, abalawuli abaphezulu, oonobhala abaziintloko, izitulo kunye namalungu ebhodi. Iba yinxalenye yoMvulo weSmart, usuku olupheleleyo lwemfundo yasimahla eyenzeka kusuku olungaphambi kokuvulwa kwe-IMEX America.
Umboniso, obhiyozela ushicilelo lwe-10th kwindawo entsha, eMandalay Bay, udibanisa iminyhadala yezoshishino kwihlabathi lonke ukucwangcisa nokubhukisha yonke into ukusuka kuhambo lwenkuthazo yequmrhu ukuya kwimisitho yabathengi be-arhente. Abacwangcisi beentlanganiso banokuhlangana nabanikezeli ngeenkonzo kwihlabathi lonke kuwo onke amacandelo oshishino. Oku kubandakanya indawo zaseYurophu iAustria, iBelgium, iRiphabhlikhi yaseCzech, iCroatia, iFrance, iJamani, iGrisi, i-Itali, iIreland, iMalta, iNetherlands, iPortugal, iSpain, iSwitzerland, iScandinavia ne-UK. I-Australia, Korea, Japan, New Zealand kunye neSingapore ziphakathi kwamazwe aseAsia-Pacific aqinisekisiweyo kunye neKenya, iMorocco, iRwanda, uMzantsi Afrika ovela eAfrika. Ukusuka eAtlanta naseCalgary ukuya eLA naseVancouver, ababonisi baseMelika naseCanada basebenza. Bajoyina iindawo ezininzi zaseLatin America kubandakanya iArgentina, iBrazil, iColombia, iCosta Rica, iEcuador, iMexico kunye nokunye.
IMEX yaseMelika Ushicilelo lwe-10 lwenzeka ngo-Novemba ngo-9 ukuya ku-11 eMandalay Bay eLas Vegas nge-Smart ngoMvulo, exhaswa yi-MPI, ngo-Novemba 8. Ukubhalisa-mahala-cofa indawo Apha. Ngolwazi oluthe kratya malunga neenketho zokuhlala kunye nokubhukisha Apha.
Impilo & noKhuseleko: Iqela le-IMEX lisebenza ngokusondeleyo neMandalay Bay kunye namanye amaqabane eLas Vegas ukuhambisa umboniso ohlangabezana neemfuno zempilo nezokhuseleko zamva nje kwaye unika uluntu amava akhuselekileyo, akhululekile kodwa angabinantsholongwane.
Bonke abathathi-nxaxheba be-IMEX America kufuneka banikeze ubungqina bogonyo olupheleleyo ngokuchasene neCovid-19 ukufumana ukungena kulo mboniso kwaye bayacelwa ukuba baprinte iibheji zabo ekhaya kwangaphambili. Iinkcukacha ezithe kratya ziyafumaneka Apha.